Iwu Chineke nyere mmadụ niile (1-7)
Iwu o nyere banyere ọbara (4-6)
Ọgbụgba ndụ eke na egwurugwu (8-17)
Amụma Noa buru gbasara ụmụ ya (18-29)
9 Chineke wee gọzie Noa na ụmụ ya, sị ha: “Mụọnụ ọmụmụ, baanụ ụba, jukwanụ n’ụwa.+ 2 Ihe ọ bụla e kere eke dị ndụ n’ụwa, ma anụ ọ bụla na-efe efe ma ihe ọ bụla na-agagharị n’ala ma azụ̀ niile dị n’oké osimiri, ga na-atụ unu ụjọ. M na-enyefe ha n’aka unu ugbu a.+ 3 Unu nwere ike iri anụ ọ bụla dị ndụ na-agagharị agagharị.+ M na-enye unu ha niile otú ahụ m nyere unu ihe ndị a na-eri eri na-epu n’ala.+ 4 Ma unu erikọtala anụmanụ na ọbara ya, ya bụ, ndụ* ya.+ 5 Ihe ọzọ bụ na m ga-ajụ ajụjụ maka ọbara unu nke bụ́ ndụ unu. Anụmanụ ọ bụla nke gburu mmadụ ga-anwụrịrị. Onye ọ bụla nke gburu* nwanne ya ga-aza ajụjụ maka ya.+ 6 Onye ọ bụla gburu mmadụ, mmadụ ga-egbu ya,*+ n’ihi na Chineke kere mmadụ n’oyiyi ya.+ 7 Ma ununwa, mụọnụ ọmụmụ, baanụ ụba, junụ n’ụwa, dịkwanụ ọtụtụ.”+ 8 Chineke wee gwa Noa na ụmụ ya, sị: 9 “Mụ na unu na ụmụ unu na-agba ndụ ugbu a.+ 10 Mụ na ihe ọ bụla dị ndụ unu na ya nọ na-agbakwa ndụ, ma nnụnụ, ma anụmanụ, ma ihe niile e kere eke dị ndụ n’ụwa ndị unu na ha nọ, ndị niile si n’ụgbọ pụta, ya bụ, ihe ọ bụla e kere eke dị ndụ n’ụwa.+ 11 Mụ na unu na-agba ndụ na e nweghị mgbe ọ bụla ọzọ m ga-eji nnukwu mmiri ozuzo bibie mmadụ niile na anụmanụ niile.* E nweghịkwa mgbe ọ bụla ọzọ nnukwu mmiri ga-ezo laa ụwa n’iyi.”+ 12 Chineke kwukwara, sị: “Ihe a bụ ihe àmà na-egosi na mụ na unu na ihe ọ bụla e kere eke dị ndụ unu na ya nọ na-agba ndụ. Ọgbụgba ndụ a ga-adịru ọgbọ niile na-abịa abịa. 13 M na-eme ka eke na egwurugwu m dịrị n’ígwé ojii. Ọ ga-abụ ihe àmà nke na-egosi na mụ na ụwa gbara ndụ. 14 Mgbe ọ bụla m mere ka mmiri rujuo n’ígwé, eke na egwurugwu ga-apụta n’ígwé ojii. 15 M ga-echetakwa ndụ mụ na unu na ụdị ihe ọ bụla e kere eke dị ndụ gbara. E nweghịkwa mgbe ọ bụla ọzọ mmiri ga-etochi ebe niile bibie mmadụ niile na anụmanụ niile.*+ 16 Eke na egwurugwu ga-apụta n’ígwé ojii. M ga-ahụ ya wee cheta ọgbụgba ndụ ga-adịru ebighị ebi nke mụnwa bụ́ Chineke na ụdị ihe ọ bụla e kere eke dị ndụ n’ụwa gbara.” 17 Chineke gwara Noa ọzọ, sị: “Ihe a bụ ihe àmà na-egosi na mụ na mmadụ niile na anụmanụ niile* nọ n’ụwa agbaala ndụ.”+ 18 Ụmụ Noa ndị si n’ụgbọ ahụ pụta bụ Shem, Ham, na Jefet.+ Mgbe e mechara, Ham mụrụ Kenan.+ 19 Ọ bụ mmadụ atọ a bụ ụmụ Noa. Ọ bụ ha mụtara ndị niile bi n’ebe dị iche iche n’ụwa.+ 20 Noa malitere ịrụ ọrụ ubi, ọ kọkwara ubi vaịn. 21 Mgbe ọ ṅụrụ mmanya si n’ubi ahụ, mmanya ahụ gbuwere ya, ya agbaa onwe ya ọtọ n’ime ụlọikwuu ya. 22 Ham, nna Kenan, hụrụ ọtọ nna ya ma gaa kọọrọ ya ụmụnne ya abụọ n’èzí. 23 Shem na Jefet wee chịrị ákwà chịlie ya elu ruo n’ubu ha. Ha jizi azụ banye n’ụlọikwuu ahụ. Ha wee chee ihu ha ebe ọzọ kpuchie ọtọ nna ha. Ha ahụghị ọtọ nna ha. 24 Mgbe Noa tetara n’ụra ma mata ihe ọdụdụ nwa ya mere ya, 25 ọ sịrị: “Ana m abụ Kenan ọnụ.+ Ka ọ bụụrụ ụmụnne ya ohu kacha ala.”+ 26 Ọ sịkwara: “Ka e too Jehova, bụ́ Chineke Shem,Ka Kenan bụrụkwa ohu Shem.+ 27 Ka Chineke nye Jefet ebe sara mbara,Ka Jefet birikwa n’ụlọikwuu Shem. Ka Kenan bụrụkwa ohu ya.” 28 Mgbe Iju Mmiri gachara, Noa nọrọ ndụ narị afọ atọ na iri ise (350).+ 29 Ụbọchị niile Noa dịrị ndụ bụ narị afọ itoolu na iri ise (950), o wee nwụọ.
^ Na Hibru, “wụfuru ọbara.”
^ Na Hibru, “Onye ọ bụla wụfuru ọbara mmadụ, mmadụ ga-awụfu ọbara ya.”
^ Ma ọ bụ “ihe niile dị ndụ.” Na Hibru, “anụ ahụ́ niile.”